कसले गर्‍यो दीपिका र रणवीरको ‘पद्यमावती’ सेटमा आगजनी ? « Mazzako Online
कसले गर्‍यो दीपिका र रणवीरको ‘पद्यमावती’ सेटमा आगजनी ?
राजस्थान पछि महाराष्ट्रको कोल्हापुरमा निर्देशक संजयलिला भन्सालीको फिल्म ‘पद्यमावती’को सेटमा आगजनी गरिएको छ । मंगलबार राती केहि मानिसहरु सेटमा पुगेर तोडफोड गरेका थिए । सेटमा पेट्रोल बम हानिएको थियो, जसले गर्दा पुरै सेट जलेर खरानी भएको छ ।
यो घटनापछि फिल्मको छायांकन रोकिएको छ । मंगलबार राती ५० जना मानिस कोल्हापुरको मसाई पठार इलाकामा पुगेका थिए । उनीहरुको हातमा रड, डन्डा थियो । सुरुमा उनीहरुले सेटमा रहेका गाडी तोडफोड गरेका थिए । पछि, सेटमा नै आगो लगाइदिएका छन् ।
२७ जनवरीमा राजस्थानबाट यो फिल्मको विरोध सुरु गरिएको थियो । करणी सेनाले सेटमै पुगेर निर्देशक संजयलिला भन्सालीमाथि हातपात गरेका थिए । रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, साहिद कपुरले यो फिल्ममा मुख्य भूमिका निर्वाहा गरिरहेका छन् ।